Madaxda Puntland iyo Galmudug oo ka wadahadlaya arrimaha doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxda Puntland iyo Galmudug oo ka wadahadlaya arrimaha doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya
December 24, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Kulanka Puntland iyo Galmudug, December 24, 2020, Gaalkacyo. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Gaalkacyo-(Puntland Middor) Kulan u dhaxeeya Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo hoggaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikariim Qoor-Qoor ayaa ka furmay magaalada Gaalakcyo ee gobolka Mudug maanta oo Khamiis ah.
Kulanka oo ay ka qeybgalayaan xubno wasiiro ah oo labada dhinac ka socda, ayaa diiradda lagu saarayaa guud ahaan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka soo socda, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyadda Puntland.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo shaqada ka joojisay duqa degmada Gaalkacyo
Madaxweynayaasha Puntland iyo Somaliland oo laga yaabo in ay kulan ku yeeshaan Dubai
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha Puntland iyo Somaliland ayaa laga yaabaa in ay kulan ku yeeshaan magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, sida ay sheegeen ilo-wareedyo. Ilo-wareedyo katirsan Puntland ayaa bog wareedka Puntland Mirror u sheegay [...]
Madaxweyne Deni oo sheegay in shir weyne ku saabsan maalgashiga lagu qaban doono Puntland xagaaga soo socda
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa qaban doonta shir weyne ku saabsan maalgashiga xagaaga soo socda, sida uu sheegay madaxweynuhu. Isaga oo Sabtidii kahadlayay munaasabada xarig ka jarka keydka haamaha shidaalka ee garoonka diyaaradaha Garoowe, Madaxweynaha Puntland [...]